September 24, 2017 सम्पादक न्युज
स्थानीय तहको चुनाव सकिएको केहि दिन नबत्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भएपछि मोरङ जिल्लामा चुनावी चहल पहल बद्न थालेको छ । नेपालीहरुको दुई ठुला चाड दशै तिहारको रमझमले भन्दा राजनैनिक पर्वले नेपालीको मन जितेको छ ।
मोरङ जिल्लाका आकांक्षी नेताहरु आफ्ना नेता तथा कार्य कर्ताहरुसंगको भेटभाटलाई तिव्रता दिन थालेका छन् । मोरङ जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ मा पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि उमेद्वारहरुको आकांक्षीहरु बढ्न थालेका छन् । प्रतिनिधि सभाका लागि कोशी हरंैचाका कांग्रेसका यूवा नेता गोपाल थापाले उमेद्वारी घोषणा गर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट टिकट दिएको खण्डमा उमेद्वारी दिने थापाको भनाइ छ । विद्यार्थी राजनितिबाट पार्टीको राजनितिमा आएका थापा स्कुलको राजनितिमा साजिलाल मा.वि. बाट नेवि संघबाट राजनिति सुरु गर्नु भएको थियो । वहांले महेन्द्र मोरङ कलेज विराटनगरबाट विए सम्मको अध्ययन गरिसक्नु भएको छ ।
बिस २०४६ साल पश्चात तत्कालिन इन्द्रपुरको वडा अध्यक्ष र २०५१ को स्थानिय चुनावमा गा.वि.स. अध्यक्षमा झिनो मतले चन्द्र गुरुङसंग पराजित हुनुभएको थियो । कांग्रेसको राजनितिमा वडा सभापति, बुथ सभापति, पार्टीको जिल्ला सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य हुदै नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट मोरङको जिल्ला कोषाध्यक्ष तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेर काम गरिहनु भएको छ । उनी राजनिती बाहेक पनि एक दर्जन भन्दा बढि सामाजिक संघ संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ । स्थानिय स्तरमा विकास निर्माणमा सक्रिय भई आफ्ना क्षेत्रका दिन दुःखीको सेवामा खट्ने र सधै साधा जीवन बिताई जनताको सर्मपित नेताको रुपमा परिचित छन् थापा ।
टिकट पाएको खण्डमा प्रतिनिधि सभाको सांसद जित्ने उनको बिश्वास छ ।
कांग्रेसको आस्थामा क्रियाशिल भएता पनि पार्टी र जाति भन्दा माथि उठेर जनताको काममा सधै सहभागी जनाउने गरेका छन् । आफ्नो ठाउको लागि केहि गरुम भन्ने भित्री मन देखी केही सपना साकर पार्न आफ्नो उमेद्वारी रहेको थापा बताउछन् । उनले पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई कुनै पनि गुटउपगुट भन्दा माथि रहेर कांग्रेसको रुख र चार तारे झण्डामा रहन सुझाव दिने गरेका छन् । उ।कार्यकर्ताहरुलाई केही दलाल माफियाहरुको लहिलैमा नलाग्न आग्रह गर्छन् ।